Antenimierampirenena: hikarama telo tapitrisa ariary isam-bolana ny depiote | NewsMada
Lozam-pifamoivoizana mahatsiaravina: Fiara 4 x 4 nifaoka olona roa, iray maty, iray tapa-tongotra ...juillet 10, 2020
Crise sanitaire: Un plan multisectoriel d’urgence de 826 millions de dollars ...juillet 10, 2020
La barre des 4.000 cas franchie : trois centres de traitement Covid-19 en renfort
Fisolokiana, kolikoly, fanararaotana andraikitra: kaomisera kaomandin’ny Fip nidoboka am-ponja
Crise sanitaire : un plan multisectoriel d’urgence de 826 millions de dollars
Lozam-pifamoivoizana mahatsiravina: fiara 4×4 nifaoka olona roa, iray maty, iray tapa-tongotra
Coronavirus: un record de 574 guérisons
Saika hanapoaka grenady…: lavon’ny zandary i Man, mpanao kidnapping naman-dry Lama
Confinement : les forces de l’ordre serrent la vis
Tsy nandaitra ny herin’ilay mpampandro dahalo: mpanao odibala, maty voatifitra
1er jour de reconfinement en photo: nitomby iray ny maty, 309 ny tranga vaovao
Coronavirus: un décès de plus et 309 nouveaux cas enregistrés
Antenimierampirenena: hikarama telo tapitrisa ariary isam-bolana ny depiote
Par Taratra sur 18/07/2019
Natsinkafon’ny Sefafi tamin’ny fanambarana ny volana avrily teo fa tokony hoferana ny tombontsoa tsy hita noanoa eny amin’ny Antenimiera, ankoatra ireo takontakonana any. Voatanisa ao anatin’izany fa mandray karama telo tapitrisa ariary isam-bolana ireo depiote tsotra. Mandray ambonin’izany ireo eo anivon’ny birao maharitra…
« Handray karama 3 000 000 Ar isam-bolana ny depiote tsotra, miampy tambin-karama 40 000 Ar isan’andro mandritra ny fotoam-pivoriana. Manampy izany ny 3 000 000 Ar isam-bolana ho an’ny solika ary 200 000 Ar hatokana ho an’ny fahana finday”, hoy ny Sefafi. Ankoatra izany, ireo mpanampy ny depiote, manana dimy avy ny solombavambahoaka tsirairay. Mbola hafa ny karaman’ireo mpikambana eo anivon’ny birao maharitry ny Antenimiera, ahitana ny filoha sy ny filoha lefitra ary ny filoham-baomiera sy ny kestora…
Fitakiana fiara 4×4
Manampy izany, 65 000 Ar isan’andro ny saran’ny hotely raha mamita iraka eto an-toerana izy ireo. Resaka hafa indray koa raha hitaky fiara tsy mataho-dalana (4×4) araka ny nambara fa fitaovana hanatanterahana ny asany sy ny fampanantenana nataony tamin’ny fampielezan-kevitra izy ireo. Mazava ny nambaran’ny Sefafi manoloana ireo. “Tokony hoferana mazava ny fitambaran’ny tombontsoa omena ny paralemantera, mialoha ny fifidianana ary mandritra ny fe-potoam-piasany. Tsy azo ekena ary maloto raha ny olom-boafidy ihany ny mametra ny vola omena azy amin’ny ankapobeny”, hoy ihany izy ireo.
Tokony ho fantatry ny vahoaka ny karaman’ny olom-boafidy
Etsy andaniny, nambaran’ny Transperency International-IM ny volana marsa 2017 fa tokony ho fantatra ny karaman’ny olom-boafidy. “Tsotra ny tanjona : ahoana ny fahafantaran’ny olom-pirenena tsotra ny karaman’ny olom-boafidy ? Anisan’izany ny filoham-pirenena, ny solombavambahoaka, ny loholona, ny ben’ny Tanàna”, hoy izy ireo tamin’izany.
Mandrisika ny fanjakana hampahafantatra ny karaman’ny olom-panjakana sy ny olom-boafidy amin’ny fakan-kevitra nataony ny Transperency International-IM.
Araka izany, tokony hampandinika sy hampieritreritra ireo voalaza ireo raha tena hiroso amin’ny fanovana ny firenena ny mpitondra. Efa nisafidy ny hametraka ny politikan’ny fitsitsiana.
Eco brèves 11/07/2020
Appui à la formation professionnelle : l’AFD accorde un financement de 9 millions d’euros 11/07/2020
Route nationale: des voleurs d’équipements routiers appréhendés 11/07/2020
Covid-19 – Fonds détournés : Polémique montée de toute pièce 11/07/2020
Impacts de la crise sanitaire: l’emploi et les revenus des ménages durement touchés 11/07/2020
Fakafaka: Aiza ilay kolontsaina malagasy ?